Ilaka Centra Ambositra : Mazda nahatrarana toaka gasy 500 litatra, olona 13 voasambotra | NewsMada
Ilaka Centra Ambositra : Mazda nahatrarana toaka gasy 500 litatra, olona 13 voasambotra
Notazonin’ny zandary ireo olona miisa 13 voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny trafikana toaka gasy tratra tao amin’ny fokontany Ilaka Centre Ambositra, afakomaly tolakandro. Tratra tao anaty fiara Mazda saika hihazo aty an-dRenivohitra ireto toaka gasy ireto…
Tratran’ny zandary nanao barazy tao Ilaka Centre distrikan’Ambositra, afakomaly tolakandro ireo toaka gasy 500 litatra nentin’ny fiara Mazda iray hihazo an’Antananarivo. Araka ny fanazavan’ny zandary, nahazo loharanom-baovao mialoha momba ny fisian’ity fiara Mazda mitondra toaka gasy ity izy ireo ka efa nandrasana fotsiny ny handalovan’ny fiara. Notazonina avy hatrany ireo olona miisa 13 samy monina ao Mahazina Ambatofinandrahana izay voalaza fa tompon’ireo toaka gasy ireto. Taorian’ny famotorana ireo olona tompon’entana, niroso tamin’ny fandorana ireo toaka gasy ny zandary tao Ilaka Centre teo anatrehan’ny tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana.
Amin’ny raharaha trafikana toaka gasy toy izao misy ny lamandy takiana amin’ireo tompon’entana, saingy mety hiafara amin’ny fampidirana am-ponja izany raha tsy voaloa izany. Maro ireo mpanao trafikana toaka gasy efa tratran’ny zandary tamin’iny faritra iny sy ny RN 7, saingy tsikaritra kosa fa vao mainka mihamirongatra ity fanaovana trafikana toaka gasy ity. Mitovy laharana amin’ny trafikana andramena sy rongony ary taolam-paty ity toaka gasy ity. Tsy afa-misaraka amin’ny kolontsaina Betsileo anefa ny toaka gasy, saingy misy kosa ireo minia manosihosy izany amin’ny alalan’ny fanaovana trafika azy ity.
Sao tokony hojeren’ny fanjakana ny hahafahana mampanara-penitra itony toaka gasy itony mba hitovy laharana amin’ireo toaka lafo vidy sasany nandalo fitiliana tany amin’ny laboratoara.